MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2015-02-01
at 2/06/2015 11:56:00 AM No comments:
at 2/06/2015 11:52:00 AM No comments:
at 2/06/2015 11:50:00 AM No comments:
at 2/06/2015 11:49:00 AM No comments:
at 2/06/2015 11:43:00 AM No comments:
at 2/05/2015 10:42:00 AM No comments:
ဖားကန့်တပ်မမှ ဖမ်းထားသည့် အလောင်းစောင့် (၄)ဦးယခုထိ မလွတ်လာသေး
ဖားကန့်တပ်မမှ ထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် ကိုလဆမ် (ကချင်)၊ ဦးထွန်းသိမ်း(ရခိုင်)၊ ကိုစံလင်းအောင်(ရခိုင်)၊ ကိုအိုက်လင်း(ရှမ်း) တို့သည် ယခုအထိပြန်မလွတ်လာသေးကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
ဖားကန့် ဒေသ ဂျပ်ဂတ်မော်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ (၃) ရက်နေ့က ကျောက်တူးနေစဉ်လက်နက်ကြီးကျပြီး သေဆုံးခဲ့ရသည့် မောင်ကွမ်ဒင့်နော်အောန်၏ အလောင်အားစောင့်နေသည့် ကျင်းတူး သူငယ်ချင်း (၄)ဦးအား ဖားကန့်တပ်မတွင် ဖမ်းဆီးထားခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
at 2/05/2015 10:38:00 AM No comments:
at 2/05/2015 10:37:00 AM No comments:
at 2/05/2015 10:26:00 AM No comments:
at 2/05/2015 10:25:00 AM No comments:
ဇန်န၀ါရီ (၂၅) တွင်ဗမာစစ်တပ် ခမရ (၅၀၂) မီးရှို့သတ်ဖြတ်လိုက်သော အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ
၁. မောင်မဟော်လဂျာ (အသက် ၂၀)
၂. မောင်လထော်ခွန်ဖုန်း (အသက် ၁၈)
၃. ဦးမရန်ဒွဲရိန်း (အသက် ၂၄)
၄. ဦးမရန်ယော် (အသက် ၄၅)
at 2/05/2015 10:22:00 AM No comments:
at 2/05/2015 10:19:00 AM No comments:
at 2/05/2015 10:18:00 AM No comments:
၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ကံဆီးရွာတဝိုက်က စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဆန်အိပ် ၁ ထောင်နဲ့ အခြားစားနပ်ရိက္ခာတွေကို လှူဒါန်းဖို့ ဒီနေ့ မြစ်ကြီးနားကို သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတော် ရဝေနွယ် (အင်းမ)နဲ့ မြစ်ကြီးနားဒေသခံတွေ ရဲ့ အကူအညီကို သူတို့အဖွဲ့က သွားရောက်ပေးအပ် မှာဖြစ်တယ်လို့ ၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့က ကိုမြအေးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
"ဖားကန့်က ကံဆီးကျေးရွာကို သွားပြီးတော့မှ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို ဆန်အိတ်တစ်ထောင်နဲ့ တခြားစားစရာသောက်စရာတွေပါမယ်ပေါ့၊ အဲ့ဒါကို ကျနော်တို့ ဒီနေ့သွားလှူဖို့ရှိပါတယ်"
at 2/04/2015 02:17:00 PM No comments:
မော်ဟန်ကျေးရွာ ဒေသခံများအား အစိုးရတပ်မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်
-ရှမ်းပြည်မြှောက်ပိုင်း မော်ဟန်ကျေးရွာဒေသခံ(၁၀)ဦးခန့်အား အစိုးရတပ် ခလရ(၂၄၁)မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
-၂၀၁၅ဇန်န၀ါရီလ (၃)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် မော်ဟန်ကျေးရွာအနီးတွင် အစိုးရတပ်နှင့်ကေအိုင်အေ တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အစိုးရတပ်မှထိုဒေသခံများအား တစ်နေရာတွင်စုစည်းကာ မေးမြန်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
-ထိုသို့စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးနောက် ဒေသခံ(၁၀)ယောက်ခန့်အား ကွတ်ခိုင်ဗျူဟာသို့ အစိုးရတပ်မှ ဖမ်းဆီးခေါ် ဆောင်သွားကြောင်းသိရသည်။
at 2/04/2015 02:13:00 PM No comments:
စစ်တပ် မှ မော်ဟန်ရွာ သား (၁၀)ဦးအား ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်။ ရွာသားများ၏ ပစ္စည်းများ အား လုယူ။
(၃.၂.၂၀၁၅) ရက်ေန့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ၊ ကွတ်ခိုင် မြို့ နယ် ၊ ကွတ်ခိုင် နှင့် တာမုံန်းညှဲ အကြား ရှိ မောဟန်ကျေးရွာ သို့ မြန်မာ စစ်တပ် များရောက်ရှိ လာပြီး
မော်ဟန်ကျေးရွာ ၊ရပ်ကွက် (၄) အတွင်း ရှိ ရွာသားများ ၏ အိမ်များမှ ပစ္စည်း များ အား ၄င်း စစ်သားများ (ဗမာစစ်သား) များ မှ ၄င်း တို့ ကြိုက်သော ရွာသားများ ၏အိမ်ထဲရှိ အဖိုးတန်ပစ္စည်း များ အား အကုန် ယူဆောင်သွားကြောင်း ဒေသခံများထျံမှ သိရှိရပါသည်။
at 2/04/2015 02:12:00 PM No comments:
ဖားကန့် ဒေသ ဂျပ်ဂတ်မော်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ (၃) ရက်နေ့က ကျောက်တူးနေစဉ်လက်နက်ကြီးကျပြီး သေဆုံးခဲ့ရသည့် မောင်ကွမ်ဒင့်နော်အောန်၏ အလောင်အားစောင့်နေသည့် ကျင်းတူး သူငယ်ချင်း (၄)ဦးအား ဖားကန့်တပ်မတွင် ဖမ်းဆီးထားပြီး
at 2/04/2015 10:25:00 AM No comments:
ဇန်နဝါရီ ၁၉ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ရက်နေ့ အထိ အရပ်သား ပြည်သူ သတ်ဖြတ်ခံရသူဦးရေ ၈ဦးရှိခဲ့ပြီး ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် မြို့ မှတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ် မှ ၇ဦးတို့ဖြစ်သည်။
ထို့ အတူ ပျောက်ဆုံးနေသူများလည်းရှိသည်။ ဖားကန့် မြို့ မှ ၄ ဦးပျောက်ဆုံးနေပြီး ရှမ်းပြည်နယ်မှ ၁ဦးပျောက်ဆုံးနေသည်။
အလောင်းစောင့်နေသည့် ကျောက်တူးသမားလေးဦး အား အစိုးရတပ်မှဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်
၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ရက်နေ့ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသွား သည့် ကျောက်တူး သမား ဒေးဗစ် နော်အောန်၏ အလောင်းအား ၄င်း၏သူငယ်ချင်းလေး ဦးမှ စောင့်နေစဉ် အင်အားတိုးချဲ့လာသည့် အစိုးရတပ်မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွား ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
at 2/03/2015 02:04:00 PM No comments:
at 2/03/2015 11:26:00 AM No comments:
at 2/03/2015 11:23:00 AM No comments:
at 2/03/2015 11:16:00 AM No comments:
(ခမရ-၅၀၂) မှ ကချင် အရပ်သား (4) ဦးကို ရက်စက်စွာ နှိပ်စက်၊ မီးရှို့ သတ်ဖြတ်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တွင် မြန်မာ စစ်တပ် (ခမရ-၅၀၂) မှ အပြစ်မဲ့ ကချင် ရွာ သား (4)ဦး အား ယခု ရက်ပိုင်း အတွင်း ထပ်မံ ရက်စက် စွာ နှိပ်စက် သတ်ဖြတ် ပြီး မီးရှို့ သတ် ဖြတ် ခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ရှမ်း ပြည် နယ်မြောက်ပိုင်း "မလွန်ဘွမ်ခါး ကျေးရွာ" မှ ရွာ သားများ သည် ၄င်းတို့
၏မီးသွေးတွင်း သို့ မီးသွေး သွား ဖုတ် နေကြစဉ် (၂၅.၁.၂၀၁၅) ရက်နေ့ ၌ မြန်မာ
စစ်တပ် (ခ.မ.ရ-၅၀၂) စစ်ကြောင်း မှ ၄င်းတို့ အား ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင် သွားခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၄င်း တို့ အား ထမင်းသွားပို့ သော ရွာသား (၁) ဦးမှာ ကံကောင်းထောက်မစွာ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် လာခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
at 2/02/2015 11:20:00 AM No comments:
at 2/02/2015 10:51:00 AM No comments:
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ကြီးလေးဖွဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ ဆွေးနွေး
ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့အတွက် ဇန်နဝါရီလ ၃ဝ ရက်နေ့က အထူးဒေသ (၄) မိုင်းလားဒေသမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးလေးဖွဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကို KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ UWSA ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး၊ RCSS/SSA ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်နဲ့ မိုင်းလား အထူးဒေသ (၄) MDAA အဖွဲ့တို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေအရ လာမဲ့ဖေဖဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ တစ်ပြည်လုံးအပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုရေးမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေနိုင်တဲ့အတွက် တစ်ပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အခုလို ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူ RCSS/SSA က ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလောင်စိုင်းက ပြောပါတယ်။
at 2/02/2015 10:48:00 AM No comments: